China Carbide okoxande Woodworking Iimela eziguqulwayo nge 2 Imingxunya abavelisi kunye nabathengisi | Xinhua
Ikhabhayithi yeRotary Burr
Ipeyinti yeCarbide Paint Scraper Blades
Amanzi nemilomo esirhabaxa Waterjet
Iikhabhayithi zekhabhayithi zekhabhayithi
Carbide rhanga-Iibhodi Slitting Iimela
Iikhabhayithi zekhabhayithi zeshishini leBhetri
Iikhabhayithi zekhabhayithi yokusika kweFayibha
Icebo lokucoca ukusela kwecuba
Izixhobo zeCarbide Woodworking
Iimela ezijikelezayo zoMcwangcisi oPhathekayo
Iikhabhayithi ezibuyiselekayo zeCarbide
IProfayili yeCarbide Isitshixo se-Edge Trimmer Faka iiKhasi
Ngokhuni Carbide Planer Iincakuba For eziphathekayo ...
Iikhabhayithi zekhabhayithi eziguqukayo
Iikharbidi eziBuyayo eziBuyayo ngeRadius Corner
Carbide okoxande Woodworking Reversible Kniv ...
I-Carbide Radius Scraper ye-Edgebander
2-iphiko umsiki Head Carbide yabucala Faka Iimela
Carbide okoxande Woodworking Iimela eziguqulwayo ngeHole ezi-2
Iimela ezixande zeCarbide eziguqulwayo zenziwe ngemicron yesayizi yokutya okuziinkozo ngokuxhathisa okuphezulu kunye namandla okugoba. Ezi zimela zigqityiweyo zenziwa yi-CNC kunye nezixhobo ezizodwa eziphantsi kwenkqubo yemveliso yamanyathelo angama-27.
I-K08 carbide eqinileyo yenza imiphetho yezona zihlala ixesha elide, ikunike amava angcono kunye nokusika okuzinzileyo.
Iikona zokufaka eziguqukayo ezinokubuyela umva zibukhali kakhulu kungekho radius, kokona kulungileyo ukujika iinkangeleko ezichanekileyo kunye ne-90 ° ngaphakathi kweekona.
Amacala ama-2 asemacaleni anokutshintshela ukusika imiphetho yokusika ngokukhawuleza, okunciphisa kakhulu ixesha.
Ihlala ixesha elide, isika ngokugudileyo kweyona mithi ilukhuni. Isetyenziselwa ukusika iinkuni ezijikelezayo / zokucheba iziqwengana, ii-groovers, iintloko ze-helical planer cutter, kunye nezinye izinto ezenziwa ngomthi.
Inkampani yethu ineminyaka engaphezulu kwama-20 yembali yemveliso yezixhobo zokusika ze-carbide carbide, egxile kwimveliso yeetungsten carbide iimela eziguqukayo kunye nokufakwa kwe-carbide eyahlukeneyo.
Ngaphezu kwesiqingatha seemveliso zithunyelwa ngaphandle eYurophu, eUnited States nakwamanye amazwe aphuhlileyo nakwimimandla. Ukusebenza kwemveliso kuyahlangabezana ngokupheleleyo neemfuno ezingqongqo zezixhobo ze-Edgebander. Imveliso esemgangathweni ikwindawo ekhokelayo kumacandelo ezixhobo zokusebenza kwekhaya nakwamanye amazwe.
Ubude (mm) Ububanzi (mm) Ubukhulu (mm) I-Angle ejikeleziweyo "a" Ukusika imiphetho
29 12 1.5 35 ° 2 Umda
30 12 1.5 35 ° 2 Umda
30 12 2.5 35 ° 2 Umda
40 12 1.5 35 ° 2 Umda
49.5 12 1.5 35 ° 2 Umda
50 12 1.5 35 ° 2 Umda
59.5 12 1.5 35 ° 2 Umda
60 12 1.5 35 ° 2 Umda
Ubungakanani obungaphezulu okanye iMveliso eChongiweyo iyafumaneka, nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi
Q: Ndingafumana iisampulu zovavanyo zasimahla?
A: Ewe, ukuba unemfuno ecacileyo, sinokubonelela ngeesampuli zasimahla zokuvavanya.
Q: njani malunga nexesha phambili?
A: Sineenkcukacha eziqhelekileyo kwisitokhwe, kwaye sinokuthunyelwa ngaphakathi kweentsuku ezintathu emva kokuqinisekisa isivumelwano.
Q: Ngaba umzi-mveliso wakho unokubonelela ngemveliso ye-OEM?
A: Ewe, ukuba ubungakanani bokuthenga kwakho buhlangabezana neemfuno, sinokuyila ukupakishwa ngokweemfuno zakho
Q: Ngaba uqinisekisa umgangatho?
Ewe, sineenkonzo zokulandela umkhondo eziqinisekiswe ngumgangatho kwiimveliso ezithengisiweyo. Ukuba unemibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nabasebenzi bethu bokuthengisa. Uya kufumana inkonzo eyonelisayo emva kwentengiso ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Egqithileyo I-Carbide Radius Scraper ye-Edgebander
Okulandelayo: Iikharbidi eziBuyayo eziBuyayo ngeRadius Corner
Iikhabhayithi zeKhabhayithi eziGuquliweyo zokuSebenza kweNkuni
Iikharbidi eziBuyiswayo eziBuyayo ngeRadius Corner
Carbide Woodworking Iimela eziguqulwayo
Ukuveliswa kwezixhobo ze-carbide eziphezulu